ယောက်ျားကောင်း-မောင်းမတစ်ထောင်တို့ အတွက် သတင်းကောင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » ယောက်ျားကောင်း-မောင်းမတစ်ထောင်တို့ အတွက် သတင်းကောင်း
ယောက်ျားကောင်း-မောင်းမတစ်ထောင်တို့ အတွက် သတင်းကောင်း
Posted by ဦး ဂျစ် on Jul 18, 2012 in Myanma News, News | 19 comments
Truvada ကတော့ ထိရောက်တဲ့ အကျိုးထူးတွေ ရှိခဲ့တာ အတည်ပြုနိုင် ပါတယ်လိုလည်း ပြောကြား သွားခဲ့ပါတယ်။ အခု ဒီ ဆေးဝါးကို FDA ကျောထောက် နောက်ခံပြုထားတဲ့ ကယ်လီဖိုးလ်နီးယား အခြေစိုက် Gilead Science ကထုတ်လုပ်ခဲ့ တာ ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကို ဇူလိုင်လ ၁၇ ရက်နေ့ The Gazette သတင်းမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ရွာသူားတွေ တင်ပြီးပြီလားတော့ မသိဘူးခင်ဗျ …။
လက်ဆော့ပြီး တင်ပေးလိုက်ပါတယ် …
မျက်စီ နဲနဲ လည်နေပါတယ် ။
HIV ရှိသူ ရောဂါ မတက်အောင် တားဆီးပေးတာလား …
ရောဂါ ရှိပြီးသူများထံမှ မရှိသူများ ဆီ မရောက်အောင် ကာကွယ်တားဆီးပေးတာလား။
တစ်ခြား ဆိုဒ် မှာလည်း ဖတ်ရပေမဲ့ အဲ့ဒီလို ဘဲ နားမလည် ဖြစ်နေလို့ပါ။။
သတင်းက အမှန်အကန်များလားကွယ်၊ ဟုတ်မှန်ရင်တော့ သများတို့ ကဲခွင့်သာပြီ ၊
ဒါထက် ဆေး ၁ လုံး ဒေါ်လှ ၅၀ ဆိုရင် အခက်သား။
ဟုတ်ရဲ့လား ကိုဂျစ်ရာ ၊ သေချာလို့ ကြေငြာတာလား ။
သူကြီးကိုခိုင်က တော့ ရှင်းပြန်ိုင်လောက်ရဲ့ ကထူးဆန်းရေ …
ကျုပ်လဲ ဟိုမွှေ ဒီနှောက်နဲ့ အခုမှ တွေ့လာလို့ အများဝမ်းသာရအောင်
ဂယ် ဟုတ်ရင်တော့ ကန်းတာပေါ့နော်..
ဇွတ်အတင်းပြောရရင် လွတ်လွတ်လပ်လပ် ကဲလို့ရပြီ ဆိုခြင်တာနဲ့တူတယ် ၊
သတင်းကောင်းတပုဒ်ပါ ၊ မြန်မာပြည်ကို အဲဒီဆေး ရောက်ပြီတဲ့လား ?
ကမန်းကတန်းကူးချခဲ့တာမို့ ကျေးတော်မျိုးလဲ ကိုပေ ဖတ်သလောက်လေးပဲ
ဗဟုသုတ ပြည့်စုံကြွယ်ဝ တဲ့ မန်ဘာတွေ ဆီက အတွေးအခေါ် နဲ့ အသိပညာ
ကို ဖိတ်ခေါ်ထားခြင်းသာလျှင်ဖြစ်ပါတယ် …ကိုပေ ..။
မူလကတော့ Treatment အတွက် သုံး တဲ့ဆေးဗျ..
နောက်ပိုင်းမှ .. ကာကွယ်ဆေး prophylactic အဖြစ် သုံးဖို့ ..ခွင့်ပြုချက်ရသွားတယ်
လို့ တွေ့တာပဲ ..၂မျိုးသုံး ပေါ့…
Tenofovir/emtricitabine, trademark Truvada by Gilead Sciences, isafixed-dose combination of two antiretroviral drugs used for the treatment of HIV. It consists of 300 milligrams of tenofovir and 200 milligrams of emtricitabine. By combining the two agents into one tablet, it reduces the pill burden and increases compliance with antiretroviral therapy.
significantly decreased ဆိုတော့ ..၁၀၀% မဟုတ်သေးဘူး ပေါ့..
သစ်ထူးလွင်မှာလည်းဖတ်ရတယ်မရှင်းဘူးဗျ။ဖြစ်ပြီးတဲ့လူသောက်ရတာလား။မဖြစ်ခင် ပိုးရှိတဲ့ လူကိုသွား
အိပ်မိတဲ့ အခါကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ သောက်ရတာလား။
ူသူသောက်မှ သူ့ ဆီကတဆင့် အခြားသူများဆီသို့ ကူးစက်နှုန်းကိုလျော့စေပါတယ်။
( ဥပမာ အိမ်ထောင်ဖက် ၊ လိင်ဆက်ဆံဖေါ် )
လူတွေဒီဆေးကိုသုံးဖို့အခက်အခဲတွေရှိနေပါတယ်
၁)ဈေးနှုန်း – နည်းနည်းတော့ဈေးကြီးတယ်
၂)ကာကွယ်နိုင်မှု – ၁၀၀%အပြည့် မရှိပါ အပြည့်အဝစိတ်ချလို့ မရ
၃)ကာကွယ်ပုံ – သူများဆီကနေ ကိုယ့်ဆီမကူးအောင်ကာကွယ်တာမဟုတ်ဘူး
အစိုးရက program တခုအနေနဲ့အခမဲ့တိုက်ရင်တော့မသိဘူး ၊ ကူးစက်နှုန်ကျသွားတာပေါ့
ဒါကပိုလို့ တောင်မဖြစ်နိုင်သေး ၊ ပီးတော့တိုက်ရင်တောင် အလုပ်ရှုပ်တယ်ဆိုပီး မသောက်မဲ့သူကရှိဦးမယ်
TB program တွေမှာတောင် compliance failure (ဆေးသောက်ရန်ပျက်ကွက်ခြင်း) တွေအများကြီး
အချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင် ကဲချင်သူများ ကဲလို့ မရသေးပါ
ကာကွယ်ဆေး (သို့ ) အပြတ်ကုနိုင်တဲ့ဆေးပေါ်မှပဲ ကဲကြပေါ့
ကြိုးစားဂျပါ… နောင်တစ်ခတ်မှာခေါင်းဆောင်ဖြစ်မှာ ဒီလူဒွေပဲမဟုတ်လားဗျာ… ဟုတ်တာပေါ့…
ဝိုး — မင်္ဂလာ ရှိပါတင်း သတင်း ဖြစ်ပါသည် ၊ ကျနော်အပါအဝင် လူသားများအတွက် ၊
လူရှုပ်များ အဲ လူသားများကို နှိပ်စက်ကလူပြုနေသည်မှာလည်း ရာစုနှစ် ခန့်ရှိနေခဲ့
ဂျစ်ပချီ အနော့ဂို တစ်ဘူးပို့ပေး ခ်ခ် အနော်တို့ညို့ဂ နှာဘူးဂျီးဂို တွားပေးမရို့ ခ်
လူကလေး ဝေးလွင့်တိမ်က ရှုပ်ချင်တယ်ပေါ့ ဟတ်လား..
၂ ဗူးမှာထားတယ် ….
လူကလေး အတွက်ရယ် ၊ သားဦးမြေးဦး အတွက်ရယ် ပေါ့…
အောက်မှာလေ သူ့ အတွက် မပါဘူးဆိုလို့ ဒေါခီး နေလေရဲ့….။
ကာကွယ်တာကတော့ ပေါ်တာကြာပါပြီ ….. ဒါကပျောက်တဲ့ဆေးထင်တယ်
(သံခမောက်ဆောင်းရင်တော့ လူစွမ်းကောင်းပေါ့) အဟွတ်အဟွတ် ချောင်းကလည်းဆိုးလိုက်တာ
ကိုပေ..က ကျွန်တော့်ရဲ့ဘယ်တော့မှ…… ပိုစ်မှာ.. ဒီ ပိုစ်ရဲ့လင့်လေး ပေးသွားလို့.
လာ ကြည့်တာ ။
အကျိုးများတဲ့ ပို့စ်ပဲ..နော် ။ သားတို့ .. သိထားသင့်တာပေါ့ဂျာ..။
ယောကျာ်းကောင်းယောကျာ်း ကောင်း မောင်းမတထောင်ဆိုပြီး သရမ်းဖို့ ရာအတွက်
ဒီဆေးမျိုးထွက်လာတာ … ကြိုဆိုစရာကောင်းပေမယ့် … လွဲမှားတဲ့ အသုံးပြုမှုမျိုးနဲ့ဆို … ဆိုးကျိုးဘက်ကိုများ ဦးတည်နေတော့မလား မတွေးတတ်ပါဘူး ။
ဒီဆေးကြောင့် ရောဂါပိုးရှိနေသူကနေ ကူးစက်မှုနှုန်းလျော့နည်းသွားတယ်ဆိုပြီး …. ရောဂါပိုးရှိသူက မဆင်မခြင်နေမယ် .. လူကောင်းတွေကလည်း … ကြိုတင် ကာကွယ်ရေး ကိစ္စတွေမှာ .. အားနည်းကုန်မယ်ဆိုလျှင် …. ကူးစက်မှုနှုန်းပိုမြင့်လာနိုင်တယ်မဟုတ်လားဟင် …. ။
ရောဂါပိုးဖြစ်ပွားမှုနှုန်းကို ဟန့်တားပေးတယ်သာပြောတာ … အပြီးပိုင်မကူးစက်နိုင်အောင် ထိန်းချုပ်ပေးတယ်ဆိုတာမျိုး မဟုတ်သေးလို့ ….. ဆေးကိုယုံပြီး မပေါ့ ဖို့လိုပါတယ် … ။
တကယ်သာ အကျိုးပြုမယ့်ဆေးမျိုးဆို .. တလုံး အစိမ်း၅၀ဆိုလည်း ကျေကျေနပ်နပ်ပေးကြမယ့် လူတွေရှိပါတယ် …. ။